मलाई गर्भ’वती बनाऊ – पाँच सय युरो लैजाऊ’ ! - Samachar Post Dainik
मलाई गर्भ’वती बनाऊ – पाँच सय युरो लैजाऊ’ !
काठमाडौ । इन्टरनेटमा आफ्नो तस्विर राखी आफूलाई गर्भवती बनाउन पुरुषलाई खुलेआम यौ”न प्र”स्ताव राखेपछि एक जना रोमानियाली महिला अहिले सेलिब्रेटी बनेको छन् ।
पश्चिमी रोमानियाको टिमिसोआरामा बस्ने यी २५ वर्षीया अडेनिया अबलुले आफूसँग यौ”नस”म्प”र्क राखेर गर्भवती बनाउने पुरुषलाई ५ सय युरो पारिश्रमिक दिने घोषणासमेत गरेकी छन् ।आवेदनमा छानिएका पुरुषले वी”र्य उपलब्ध गराए पनि उनले अभिभावकको अधिकार नपाउने सर्त अगाडि सारेकी छन् ।
बेलायती अखबार द मिररमा छापिएको समचारअनुसार एडेलिनाले आफ्नो फेसबुक पेजमा यस्तो विज्ञापन पोस्ट गरेकी छन्, ‘केटाहरुभेट्नु त ठूलो कुरा होइन्। तर, म सम्बन्धमा बसेर समय बर्बाद गर्न चाहन्नँ । बरु म त्यसका लागि पैसा तिर्छु’, उनले फेसबुकमा लेखेकी छन् ।
झण्डै डेढ करोडले हेरिसकेको भिडियोमा यि युवतीले के गर्दैछिन ? निकै नै सुन्दर एक युवतीको बाथरुम भिडियो संसारभर भाइरल बनेको छ । ति युवतीले बाथरुममा छिरेपछि के-के गरिन्, त्यो सबै एक गोप्य क्यामेरामा कैद गरिएको थियो ।
त्यत्तिकैमा उनले एक्कासी क्यामेरामा हेरेर भन्छिन्, ‘तपाईं मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ नि होइन ? सायद केहीको प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईं जे का लागि प्रतिक्षा गर्नुभएको हो, त्यो नहुँदासम्म कुर्नुहुन्छ नि होइन ? तर त्यो हुँदैन ।
केही हुँदैन । सबैभन्दा पहिले म यो ट्याब (धारो) बन्द गर्छु । यहाँ पानी खेर गइरहेको छ ।’
प्रकाशित मिति २७ आश्विन २०७८, बुधबार ११:२७